COVID_19 Archives - Xinhua News Agency
All posts tagged "COVID_19"
နယူးယောက်၊ မေ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁သန်း သေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသမိုင်းမှတ်တိုင် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းတုံ့ပြန်မှု၊ ကပ်ရောဂါနှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် လူ့အသက်များကိုတန်ဖိုးမထားမှုများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ သေဆုံးမှုများ တိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။ (Xinhua) ……………………………………. (English Version)...
ဝါရှင်တန်၊ မေ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူမှာ ကမ္ဘာ့အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်အားဖြင့် ၁ သန်းအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကာ ယင်းဖြစ်ရပ်ကို “ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသမိုင်းမှတ်တိုင်” အဖြစ် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က မေ ၁၂ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ “တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းက အစားထိုးမရနိုင်တဲ့...
COVID-19 UPDATES5 days ago
ဝါရှင်တန်၊ မေ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူမှာ ကမ္ဘာ့အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်အားဖြင့် ၁ သန်းအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကာ ယင်းဖြစ်ရပ်ကို “ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသမိုင်းမှတ်တိုင်” အဖြစ် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က မေ ၁၂ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ “တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းက အစားထိုးမရနိုင်တဲ့...
ရှန်ဟိုင်း၊ မေ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာသည့် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းစက်ရုပ်များဖြင့် လုပ်အားကိုအပြည့်အဝ အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua) ……………………………………………. (English Version) “Robot volunteer” aids Shanghai community’s epidemic fight Service...
ဂျီနီဗာ၊ မေ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် တိုက်ရိုက်(သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက် သေဆုံးသူ ၁၅ သန်းနီးပါးရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အနက် အများစုမှာ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကတိုက် စသောဒေသများမှဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) ၏ မေ ၅ ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရ...
ရှန်ဟိုင်းတွင် ကင်ဆာလူနာအတွက်ဆေးဝါးများ ဒရုန်းဖြင့်ပို့ဆောင်
ရှန်ဟိုင်း၊ ဧပြီ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် လတ်တလော COVID-19 တစ်ဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် ကင်ဆာလူနာတစ်ဦးထံသို့ ဒရုန်းများဖြင့် ဆေးဝါးများကိုပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ Xuhui ခရိုင်တွင် ကင်ဆာဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရသည့် သက်ကြီးပိုင်းတစ်ဦးမှာ ဧပြီ ၂၇ ရက်က ဆေးဝါးများအရေးပေါ်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒရုန်းနှစ်စင်း အား ၂၀...
အိုကီနာဝါကျွန်း ဂျပန်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး နှစ် ၅၀ အကြာတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ကာ စီးပွားရေး အဟန့်အတား ဖြစ်နေ
Politics, Law & Military23 mins ago